Gabatee bakka bu'iinsaa Ofumaan sirreessuudhaaf ykn jechoota bakka buusuu ykn gabaajee galmee kee keessaa gulaala.
Gabatee bakka bu'insaa dandeessiissuuf Meshaalee - Dirqalaalee OfSirreessaa fili, caancala Dirqalaalee cuqaasi, ittaansuudhaan Gabatee bakka bu'iinsa fayyadamaa fili. Gabatee bakka bu'iinsaa fayyadamuuf wayita barreessitu, Dhangii - OfSirreessaa - Waayita Barreeffamuu fili.
Bakka bu'iinsaa fi quxaalee keessaa sanduuqa afaanif:
Afaan kan seeroota bakka bu'insaa uumuu ykn gulaaluu barbaade fili. LibreOffice jalqaba quxaaleef kan afaaniif qubannoo qarree ammeef galmee keessatti hikaman barbaada, ittaansuudhaan afaanota hafan barbaada.
Gabatee baklka bu'insaa
Goodayyaawwan saxaatoo fi wantoota OLE galfta Ofsiirreessaa keessaa hanga isaan akka arfiilee barruu keessaatti korkordaa'eetti itti dabaluu ni dandeessa. Goodayyaawwan saxatoo ykn wanta OLE fi xiqqaatee xiqqaatu arfii barruu tokkoo fuulduraa fi duuba wanta filii. Qaaqa kana bani, sanduuqa Bakka buusii keessatti galfata Ofsirreessaa kanaaf maqaa barreessi, ittaansuudhaan Haaraa cuqaasi.
Barruu bakka bu'iinsaa saxaatoo goodayyaa ykn wanta OLE sanduuqa Bakka buusii keessatti barruu bakka buusuubarbaaddee galchi. Barruu yoo filate jiraatte saxaatoo, goodayaa ykn wanta OLE galmee kee keessaa odeeffannoo gaariin duraan asitti galeera.
Galfata sanduuqa Waliin dhangeessuun alaa olkaa'a. Yeroo bakka bu'iinsi taasifame, barruun dhangii walfakkaatu akka barruu galmeetti fayyada.
Galfata ykn gabatee bakka bu'iinsaa ida'a ykn bakka buusa.
Maalimaa ykn maalimoota filataman dhugoomsa osoo hin barbaadiin haqa.
Title is: Bakkabuusa